अपि पावर कम्पनीको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर अपि पावर कम्पनीको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण
मुख्य खबर, लगानी 236 views
अपि पावर कम्पनीको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण
नेपालमा जलविद्युत उत्पादन तथा वितरण गर्ने उद्देश्यले २०६० साल असार ५ गते प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको हो । २०७० साल साउन ४ गते यस कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको हो । यस कम्पनीले पहिलो परियोजनाको रुपमा दार्चुला जिल्लामा ८ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको नौगड गाढ साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पुरा गरी सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै, ८ मेगावाटको अपर नौगड गाढ साना जलविद्युत् आयोजना हाल निर्माणाधिन अवस्थामा छ । साथै ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य पुरा भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग खरीद विक्री सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको छ । यो कम्पनी सामान्यतया भौगोलिक रूपमा विकट रहेको देशको पश्चिमी क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्न आँट गर्नेमा चिनिन्छ । २०७१ साल चैत ४ गते आयोजना प्रभावित स्थानियका लागि साधारण शेयर बाँडफाँट गरेको कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि २०७२ साल भदौ १५ गते बाँडफाँट गरेको थियो । शेयर कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कात्तिक २३ गते सूचीकृत गराएको थियो भने मङ्सिर २ गते शेयर खरीद विक्री शुरु भएको थियो । यस कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ५ करोड पु¥याएको छ । गत वर्षको नाफाबाट ८ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको कम्पनीले २ सय प्रतिशत हकप्रद निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ३ करोड १३ लाख ६७ हजार नाफा आर्जन गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको तुलनामा भने ९ प्रतिशत कम हो । यस वर्ष कम्पनीको विद्युत् विक्री आयमा कमि आएकाले पनि नाफामा असर पुगेको देखिन्छ ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. २७७
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. ८८८
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूूल्यः रू. २४६
१८० दिनको भारित औषत मूल्यः रू. ४०३.६३
अध्यक्षः गुरु प्रसाद न्यौपाने
प्रधान कार्यलयः थापाथली, काठमाडौं
स्टक स्टिकरः एपिआइ
दोस्रो त्रैमाससम्मको महत्वपूर्ण वित्तीय परिसूचकहरु (रू. हजारमा)
कम्पनीको दोस्रोे त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार खुद नाफाको तुलनामा चुक्तापूँजी ३ दशमलव २९ प्रतिशतदेखि घटेर २ दशमलव ९९ प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।
कम्पनीले दोस्रो त्रैमासमा १ सय ४७ दशमलव ३८ प्रतिशत बढी जगेडामा रकम थप गरेको छ । गत वर्ष रू. ४ करोड ९१ लाख १ हजार रहेको जगेडा कोष यस त्रैमासमा रू. १२ करोड १४ लाख ६४ हजार पुगेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत कम रू. १० करोड ८५ लाख ७८ हजार कुल चालू सम्पत्ति रहेको छ भने कुल चालू दायित्व ४९ प्रतिशत बढी रू. ३६ करोड ९७ लाख ९६ हजार पुगेको छ ।
दोस्रो त्रैमासमा गत वर्षको तुलनामा विद्युत् विक्री आयमा कमि आएको छ । गत वषको यसै समयमा रू. ८ करोड ७५ लाख ३२ हजार विद्युत् विक्रीबाट आम्दानी गरेको कम्पनीले यस त्रैमासमा रू. ७ करोड ९४ लाख ९६ हजार मात्र विद्युत् विक्रीबाट आम्दानी गरेको छ । अन्य शिर्षकबाट भने यस त्रैमासमा ९७ प्रतिशत बढी रू. ११ लाख १९ हजार आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।
यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा कुल खर्च भने करीब ४० प्रतिशत कम भएको छ । गत वर्ष रू. १ करोड २० लाख ३३ हजार खर्च गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ७२ लाख ३१ हजार मात्र खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले रोयल्टी बापत रू. २० लाख १६ हजार , प्रोजेक्टमा रू. ३२ लाख ८४ हजार र प्रशासनमा रू. १९ लाख ३० हजार खर्चिएको हो ।
कम्पनीको दोेस्रो त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख भए अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. ५ दशमलव ९७, मूल्य आम्दानी अनुपात ७१ दशमलव १३ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ११ दशमलव ५७ रहेको छ । सोमवारको मूल्य नेटवर्थको साढे २ गुणा छ ।
खरीद चापः कम्पनीको सोमवार भएको कारोबारमा अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापभन्दा खरीद चाप २ गुणा बढी थियो । सो समयसम्म ५ हजार १ सय १२ कित्ता शेयर खरीद र २ हजार ३ सय ७ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
८ जनवरी २०१८ ९ अप्रिल २०१८
मैनबत्ती विश्लेषणः कम्पनीको ५७ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा कालो टुप्पि र पुच्छर भएको कालो मैनबत्ती बनेको छ । यस मैनबत्तीले कम्पनीको शेयर मूल्य घट्ने सङ्केत देखाउँछ ।
आरएसआईः कम्पनीको ५७ दिनको कारोबार अवधिमा न्यूट्रल जोन (३८ दशमलव १९ स्केल)मा छ । यसले खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः कम्पनीको ५७ दिनको कारोबार अवधिमा ३ दशमलव ८२ बिन्दुमा छ । यसले उतारचढाव न्यून रहेको देखाउँछ ।
मुभिङ एभरेजः कम्पनीको ५७ दिनको कारोबार अवधिमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिदै गएका छन् । हालको मूल्य, १४ दिने औसत मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्यरेखाको बिचमा छ । हालको मूल्य रू. २ सय ७७ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महङ्गिएमा रू. २ सय ८५ मा प्रतिरोध र सस्तिएमा रू. २ सय ६७ मा टेवा पाउन सक्छ ।